China Plastic ngwaahịa imewe Manufacturer na Supplier | Meste
Plastic ngwaahịa imewe bụ kọwaa ngwaahịa udi na bughi, akụkụ na izi ezi, ọdịdị mma. Ọ dabere na ngwaahịa achọrọ na njirimara nke ihe eji eme ihe. Designdị njirimara nke ngwaahịa plastik na-ekpebi ngwa ngwa ya na nrụpụta nrụpụta.
Ngwunye ngwaahịa plastik gụnyere ọtụtụ akụkụ. Na omume, a ga-ezute ụdị dị iche iche na ụdị nhazi. Ihe omuma a gunyere: nhoputa ihe, nmekorita nke ihe obula na ihe ndi ozo, ihe ndi ozo n’ile anya site na nkedo ogwu, nchikota n’etiti shells, njikọ n’etiti shells na nhazi nke emere maka oru ufodu, wdg.
Companylọ ọrụ Mestech na-enye ndị ahịa akụkụ akụkụ plastik na ịkpụzi ọgwụ maka ngwaahịa dijitalụ dijitalụ, ndị na-ekwu okwu ike, ụlọ dị mma, oriọna ọkụ, Kitchenware na tebụl, nlekọta ahụike, kọmpụta, ngwaahịa ngwaahịa ala. Akụkụ ndị a nwere ọdịdị na nha dị iche iche, gụnyere:
(1) 、 Ebe obibi plastik
(2) 、 Plastic eku
(3) 、 Nke uzo
(4) 、 Abụọ ihe onwunwe ịkpụzi akụkụ
(5) 、 Waterproof plastic akụkụ
(6) 、 Gear, ikpuru
(7) read Eriri na ndu ndu
(8) 、 Mkpa mgbidi akụkụ
(9) 、 Debe akụkụ biya
(10) parts Elastomer akụkụ
Uzo ogwu ogwu abuo
Mgbe imewe ịbịaru nke akụkụ plastik mechara wuchaa, a na-achọkarị ịkpụzi nsị na nyocha aka ụlọ. Mgbe nile gbanwee ma melite imewe, na n'ikpeazụ tinye n'ime ebu mmepụta na akụkụ n'ichepụta.
Mestech na-enye ndị ahịa ụdị akụkụ plastik, ịkpụzi akpụzi na ịkpụzi ọgwụ na ịkpụzi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, biko kpọtụrụ anyị ma anyị ga-enye gị ọrụ kachasị mma anyị.
Nke gara aga: Imebe ngwa ụlọ
Osote: Imewe akụkụ imewe
Automobile oriọna ọkụ ịkpụzi
Ngwongwo plastik na uzo ugbo ala
Mkpa post nhazi nke plastic akụkụ